Mara ọkwa na ZTE Nubia Z11 Max nwere ihu 6 ”na 4GB RAM”
ZTE mara ọkwa na Nubia Z11 Max nwere 6 652 ihuenyo, Snapdragon 4 mgbawa na XNUMXGB RAM
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nwere ike leda ekwentị ndị China anya na ọ dị ka ha na-ewepụ ha ngwa ngwa na-echeghị ọtụtụ ihe banyere ha, ha hiere ụzọ, ebe ha na-achịkwa ịkwanye ahịa ahụ n'ụzọ ọbụlagodi na ndị nrụpụta amaara ama ga-elebara anya iji chepụta katalọgụ nke smartphones nke bụ gosipụtara otu onye ahụ ha na-echepụta nke ọma ndị ZTE, Xiaomi, Meizu na ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe ọ bụla n’ime ndị ahụ kwuru nwere ọtụtụ ekwentị nwere ike itinye ya nke ọma na etiti ọ bụla ma ọ bụ ama dị elu ama ama wepụtara site Samsung, LG ma ọ bụ HTC.
ZTE nwere akara Axon na Nubia dị ka ụzọ abụọ nke ọ na-esi amalite ịkụ nzọ dị iche iche nke anabatara nke ọma na mpaghara dị iche iche nke ụwa ma ugbu a bụ oge iji weta onye ọzọ, Nubia Z11 Max. A smartphone nwere ike ịsọ mpi na ekwentị ọ bụla nke nnukwu ụdị na-egosi zụrụ ihe dị ka $ 304 ka ọ gbanwee. Otu n'ime ihe ndị kachasị mma ya bụ ụbọchị abụọ nke nnwere onwe na 6-inch 1080p Super AMOLED ihuenyo na 2.5D curved glass. Ọ bụ ezie na ọ nwere obere nkwarụ mgbe ejiri gam akporo 5.1.1 Lollipop wepụta ya ma na anyị enweghị ike ịghọta n'oge a na fim ahụ.
2 Ndị ọzọ nkọwa
2.1 Nubia Z11 Max nkọwa
Anyị na-ekwu okwu banyere ama nke na-aga 6 sentimita asatọ na nke ahụ na-eme site na mkpebi 1080p na eriri 2.5D Super AMOLED curved na ụfọdụ Ngwurugwu adịghị ihe karịrị 1,32mm n'akụkụ ya. O nwere ihe octa-core Snapdragon 652 mgbawa na olu ya, o nwere igwefoto 16 MP n'azụ ya na ụda ọkụ abụọ nwere ụda na 8-megapixel n'ihu. Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka dị n'okpuru ebe oghere maka oghere nke igwefoto ya bụ isi dị n'azụ enweghị ike ịla.
Igwe Gorilla Glass 3 na-echekwa ihu Super AMOLED ahụ na mkpebi ya na-akpọrọ anyị na pikselụ 367 kwa inch. O nweghi mgbawa di elu dika Snapdragon 820, nke putara na otutu chere banyere ya mgbe ha na echere ncheputa nke OnePlus 3 na o gha enwe CPU, mana o n’eji ya. 4GB nke Ram na 64 GB n'ime nchekwa nke enwere ike ịgbasa site na iji kaadi microSD.
Ọ bụrụ na anyị abanye na nkọwa gbasara igwefoto bụ isi nke Nubia Z11 Max, ndị lens bụ IMX298 na o nwere na-adọ nchọpụta anya na f / 2.0 aperture.
Ndị ọzọ nkọwa
ZTE gụnyere ụfọdụ mara mma jụụ nkọwa banyere NeoPower 2.0 na teknụzụ Neovision 5.0. Otu nweta 114 awa nke egwu egwu na ruo 13 awa nke ịkparịta ụka n'networkntanet. N'ebe a, anyị ruru ụbọchị 2 nke nnwere onwe dị ka ZTE na-ekwu ma ọ bụ n'ihi batrị 4.000 mAh nke ga-adaba na Ndenye Ndenye 3.0.
Dịka m kwuru na mbụ, ihe a na-aghọtaghị bụ Android 5.1.1 Lollipop dịka ihe ndabere maka akwa akwa Nubia UI 3.9.9. Ama nke, ọ bụ ezie na o nwere sentimita 6 ndị ahụ na ihuenyo ahụ, nwere nnukwu njirimara nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-adịghị ahụ anya nke na-enye onye ọrụ ahụ mmetụta na ọ bụghị nnukwu na aka.
Nubia Z11 Max nkọwa
6-anụ ọhịa (1920 x 1080) Full HD Super AMOLED 2.5D ihuenyo na Corning ozodimgba iko 3, 100% NTSC
Octa-isi Snapdragon 652 mgbawa (Quad 1.8 GHz ARM Cortex A72 + Quad 1.2 GHz A53)
Adreno 510 GPU GPU
64 GB nke nchekwa dị n'ime ya na nhọrọ iji gbasaa ya site na microSD ruo 200 GB
A gam akporo 5.1.1 Lollipop na nubia UI 3.9.9
Igwefoto azụ 16MP nwere ụda ọkụ ọkụ abụọ, IMX298, f / 2.0 oghere
Igwefoto n'ihu 8MP, oghere f / 2.4, oghere ogo 80
Akụkụ: 159,15 x 82,25 x 7,40 mm
3,5mm Audiojack, Dolby ọdịyo
4G LTE na VoLTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 4.1, GPS + GLONASS, USB Type-C
Na ZTE nubia Z11 Max ga-abata na agba ọla edo, isi awọ na ọlaọcha na ọnụahịa nke dollar 304 na nsụgharị pụrụ iche nke Cristiano Ronaldo bara uru na dollar 349. A ga-ere ya na June 18.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » ZTE » ZTE mara ọkwa na Nubia Z11 Max nwere 6 652 ihuenyo, Snapdragon 4 mgbawa na XNUMXGB RAM
Marshmallow dị ugbu a na 10% nke ngwaọrụ gam akporo niile